Pomace chitofu: maitiro, mashandiro uye zvakanakira | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Biomass
Kune akawanda marudzi ezvitofu pamusika anoshandisa marudzi ese emafuta. Imwe yacho ndeye pomace stove. Imhando yechitofu inoshandisa mafuta epomace kana yambobviswa sehuni. Izvo hazvidi kuisirwa kwakawanda uye kushanda kwayo kuri nyore.
Muchikamu chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezve pomace chitofu, maitiro ayo uye kuti inoshanda sei.
1 pomace stove
2 Zvinhu zvekufunga nezvazvo pakusarudza pomace chitofu
3 Iyo pomace pellets inogadzirwa sei
Hukuru uye saizi yechitofu chepomace chimwe chezvinhu zvakakosha zvekufunga nezvazvo. Uye kune akasiyana maficha uye maitiro anofanirwa kuverengerwa pakusarudza pakati pemhando dzakasiyana dziripo mumusika wazvino. Kune mhando dzine zviyero zvakasiyana, uremu uye saizi. Zvinodikanwa zvemumwe nomumwe zvinofanira kurangarirwa kuitira kuti zvigone kuchinjwa sezvinobvira. Hazvibatsiri kuve nechitofu chepomace chine saizi yakawandisa uye inogona kana nzvimbo yatiri kuzopisa iri diki. Ukuwo, hazvina zvazvinobatsira kuva nechitofu chiduku zvikuru kuti ugone chengetedza simba kana imba yekudziya yakakura.
Kana iwe uri mumwe wevanhu vane imba ine nzvimbo diki, zviri nani kuti utore zvitofu zvidiki. Izvi zvakanakira kuve nazvo mufurati kana studio. Iwo akawandisa ekudziisa aya makamuri madiki. Zvigadzirwa izvi zvinogona kushandurwa maererano nehukuru hwazvo, kunyangwe zvitofu zvidiki zvidiki zvinowanzoyera pakati pemasendimita matatu ne50.
Zvinokurudzirwa kuongorora nzvimbo yatinayo mumba kuitira kuti tiite sarudzo yakanaka. Iwe unofanirwa kusarudza pakati pezvitofu zvine saizi yakakura uye simba kana diki. Zvese izvi zvinoenderanawo uye zvinokanganisa mutengo wekupedzisira wechigadzirwa. Kana tikasarudza imwe yakakura modhi yechitofu, mutengo unozokwirawo. Kunyangwe iwo achiwanzo kudhura zvishoma kana achienzaniswa nemhando madiki, anowanzo kuve anopikisa zvakanyanya uye anoshanda zvakanyanya.
Zvitofu zvihombe zvinowanzoyera kudarika masendimita zana negumi. Vazhinji vavo vane mbambo dzekubatsira kuitira kuti kushanda kwavo kuve kwakavimbiswa. Chinhu chakajairika ndechekuti hatifaniri kunetseka pamusoro pemutengo, nokuti kazhinji pane zvinopiwa mumusika wemari, haigoni kuva iyo chete yakasiyana-siyana yekufunga. Iwe unofanirwa kusarudza chigadzirwa chinonyatsoenderana nezvido zvako.
Zvinhu zvekufunga nezvazvo pakusarudza pomace chitofu
Zvitofu izvi zvine zvakanakira zvakasiyana-siyana kana mashandisirwo aachaitwa ari echokwadi. Nekusvika kwechando uye kutonhora kwakadzika, zvakajairika kushandisa rudzi urwu rwechitofu kakawanda. Icho chiridzwa chisingafaniri kushaikwa mune chero imba. Nhau dzakanaka ndedzekuti kune akawanda uye akawanda mamodheru ekusarudza kubva. Nekudaro, zvinokurudzirwa kuita sarudzo chaiyo yekusarudza pakati pemhando dzakasiyana.
Pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvaunofanira kufunga nezvazvo pakusarudza yakanakisa pomace chitofu chinokodzera zvaunoda. Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa ndeyekunyatsoongorora kunaka kwechigadzirwa chatinenge tichizotenga. Hunhu hwepamusoro hwainahwo, hupenyu hwayo hunobatsira huchava hwakareba, kunyangwe mutengo ukati wandei. Mutengo wacho chinhu chausingakwanise kufuratira. Sezvatakambotaura, pane zvimwe zvinopihwa mumisika yechitofu zvinogona kukubatsira kuti uwane ichi chigadzirwa chakachipa zvishoma.
Nguva dzose uye nguva dzose edza kusarudza yakaenzana chitofu cheumbozha pakati pekupikisa mutengo. Saizi ndiyo yakakoshawo. Kune mhando dzakakura dzakanakira nzvimbo dzakakura. Izvi hazvitaridzike zvakanaka munzvimbo diki senge studio flats nekuti dzinotora nzvimbo yakawandisa. Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa Ongorora nzvimbo yaunoronga kuisa chigadzirwa usati wasarudza pakati peimwe modhi kana imwe.
Simba rekushandisa ndechimwe chezvinhu zvakakosha pakusarudza yakanaka pomace chitofu. Zvichienderana nehuwandu hwemagetsi iyo sitofu ine, kushanda kwayo kunogona kuchinja zvakanyanya. Chinhu chakanyanya kujairika ndechekuti mumisika mune zvitofu zvisingaverengeki zvinoshandisa nzira dzakasiyana kuti dziwane mhedzisiro inodiwa. Zvisinei, zvakare kune vanhu vane chido chikuru chekushandisa zvitofu zvinoshandisa gasi uye vamwe vanoshandisa magetsi.
Maitiro ezviitiko zvakasiyana anochinja. Iwo gasi anowana zvirinani tembiricha manipulation. Zvizhinji zvezvitofu zvinoshanda nematembiricha akaiswa pakati pe150-190 madhigirii. Zvakakosha kuita sarudzo yakanaka sezvo kuwana chitofu chepomace chine simba rakakwirira kudarika zvinodiwa kunogona kuva nemigumisiro. apo simba ari pasi pemakore makumi manomwe anoonekwa senzvimbo yemhuri.
Iyo pomace pellets inogadzirwa sei
Sezvinoratidzwa nezita rayo, pomace pellets inowanikwa zvakananga panguva yekubvisa mafuta omuorivhi. Panguva ino, kusvinwa kwasara kwomuorivhi kunosanganiswa kuti zvisvike pachigadzirwa chokupedzisira. Tinowana zvikamu zvakasimba zvemiorivhi (mapfupa, ganda uye mafuta akasara) pamwe chete nemasara uye mvura yemiriwo.
Maitiro ekutora pomace haagumire pano. Izvi zvinoteverwa nekukuya uye centrifugation danho. Mhedzisiro yeichi-chigadzirwa hunyoro hwakati wandei. Pakubviswa kweiyo inonzi mafuta epomace, nhanho nyowani yekubvisa inoitwa muchirimwa chepomace.
Mafuta epomace akabudiswa uye pomace inoshandiswa kugadzira mafuta ebiomass. Kunyangwe iyo yekupedzisira fomu iri pellets, ine yakakosha calorific kukosha uye yakaderera mutengo, iwo anonyanya kushandiswa musimba uye ekupisa kwemagetsi zvidyarwa.
Kunyangwe iyo oruo pellet ichiri mafuta ebiomass uye nekudaro chigadzirwa chakagadzirwa kubva kune zvakasikwa mbishi, kushandiswa kwayo mudzimba pellet zvitofu kana boilers hazvikurudzirwe zvachose sezvo iri yakasimbiswa isiri-chepfu mafuta, saka. Izvo hazvifanirwe kusangana nehunyanzvi hunhu hunovimbisa kushanda kwakaringana kwechigadzirwa.
Kusiyana nebioforestry pellets, orujillo biofuel ine yakanyanya kunyorova mwero. Somugumisiro, huwandu hwekupisa uye nguva yekuwana kushanda kwakafanana kunowedzera zvakanyanya. Izvo zvisingabatsiri uye njodzi dzekushandisa rudzi urwu rwezvimedu hazviperi ipapo. Pomace pellets ine kusvika ku8% madota. Hapana mubvunzo kuti chokwadi ichi chinonyatsojekesa kuti haina kukodzera zvitofu zvemumba uye boilers.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve pomace chitofu uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Biomass » pomace stove